Fiahiana ny maha olona : mitsidika an’i Madagasikara ny talen’ny OCHA · Aponga
Mitsidika eto amintsika mandritra ny roa andro (hifarana anio) ny talen’ny biraon’ny Firenena mikambana mandrindra ny asa mifototra amin’ny maha olona (OCHA), John Ging. Mariky ny fanohanana an ‘i Madagasikara sy ny ezaka ataony rehetra momba ny fiahiana ny maha olona (indrindra tamin’ny fandalovan’ny rivodoza Enawo sy Ava farany) teo izao fitsidihana izao, hoy ny fanazavana.
Hidinika miaraka amin’ny fitondrana malagasy momba ny fomba fiasa vaovao entin’ny Firenena mikambana ny tenany. Mifameno ny asa fiahiana ny maha olona rehefa misy hamehana sy ny fandaharanasa fampandrosoana maharitra izay tokony hojerena miaraka hatrany.
Hihaona amin’ireo ONG malagasy sy iraisam-pirenna misahana ny fiahiana ny maha olona koa izy. Hatramin’ny taona 2011 no ho mankaty no naha voatendry azy ho tale mpandrindra ny asan’ny OCHA rehetra. Mandamina ny asa eny ifotony, manerana izao tontolo izao, izy rehefa misy ny hamehana andraisan’ny Firenena mikambana anjara.